काठमाडौं– हिन्दू नेपालीहरू आफ्नो महानचाड बडादशैंको उमंगमा रमाइरहेका छन् । नवदुर्गको पूजा र नवरात्रको उपवास चलिरहेको छ ।
रोजगारी तथा पेशा व्यवसायको सिलसिलामा देशका विभिन्न शहर र विदेशमा पुगेकाहरू पनि विजया दशमीमा नवदुर्गाको प्रसाद र मान्यजनबाट आशिर्वाद ग्रहण गर्न अनि परिवारको साथमा दशैं मनाउन घर–घरमा पुगिसकेका छन् ।
सामान्य अवस्थाका मानिसलाई दशैं आफ्नो घरमा पुगेर परिवारको साथमा मनाउने अवसर भएपनि जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई भने त्यो छुट हुँदैन ।
विभिन्न अपराध गरेर जेलजीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीको दशैं कस्तो हुन्छ त ? कैदीबन्दीले कसरी मनाउलान् दशैं ? यी प्रश्न आममानिसमा पाइन्छ ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, जेल भनेपछि त्यहाँ चाडबाड केही लाग्दैन । तर, त्यस्तो होइन । जेलमा रहेकाहरूले पनि दशैं मनाउँछन् ।
फरक यत्ति हो, अरूले घरमा गएर मनाउन पाउँछन्, तर जेलमा रहेका कैदीबन्दीले दशैंको टीका पनि सम्भव भएमा मान्यजनलाई जेलमै बोलाएर लगाउनुपर्छ ।
दशैंमा मासु पनि निकै लामो समयदेखि संस्कार नै जस्तो बनिसकेको छ ।
जेलमा रहेकाहरूले आ–आफू मिलेर खसीबोका, कुखुरा वा राँगा जस्ता मासुजन्य पशुवस्तु खरिद गरी मासु पनि खान सक्छन्, सरकारले मासु खुवाउने व्यवस्था भने छैन ।
सरकारले दशैं खर्चका रूपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यसरी कैदीबन्दीलाई जनही ३ सय रूपैयाँ दशैंखर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले बताए ।
‘सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ सय रूपैयाँ दशैं मनाउन दिएको छ, अन्य व्यवस्था भने छैन’, घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यही पैसाबाट दशैं मनाउनुपर्छ ।’
सरकारले उपलब्ध गराउने पैसा जम्मा गरेर वा त्यसमा थपथाप गरेर उनीहरूले मासुजन्य पशुपन्छी खरिद गरी मासु खान पनि सक्छन् ।
देशमा मुख्य तीन जेलको दशैं बारेको विवरण हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारा
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा दशैंमा रमाइलो गर्नका लागि फूटबल आयोजना गरियो । फूटबलमा कैदीबन्दीकै २५ वटा टीम सहभागी थिए ।
कैदीबन्दीहरूको २५ वटा टिमले भालिइराखेको केन्द्रीय कारागारका प्रवक्ता गोकर्ण खनालले बताए । ‘कैदीबन्दीले दशैंमा रमाइलो गर्नका निम्ति फूटबल आयोजना गर्नुभयो,’ केन्द्रीय कारागारका प्रवक्ता गोकर्ण खनालले लोकान्तरसँग भने ।
‘उहाँहरूले खसीबोका लगायतका पुरस्कार पनि राख्नुभएको थियो, यसरी नै रमाइलो गरेर दशैं मनाउँदै हुनुहुन्छ,’ खनालले भने ।
सरकारले दिएको ३ सय रुपैयाँले सबै मिलेर खसीबोका किन्ने र मासु खान सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको उनले बताए ।
साथै टीकाको दिन नितान्त नजिकका आफन्तलाई टीका लगाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए ।
नख्खु कारागारमा यसपटक दशैंका लागि विशेष व्यवस्था केही रहेनछ । सरकारले उपलब्ध गराएको ३ सय रुपैयाँलाई कैदीबन्दीले आफ्नो ढंगले खर्च गरी दशैं मनाउन सक्ने नख्खु कारागारका जेलर सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘कैदी बन्दीहरूले अरूले जस्तै दशैं मनाउनुहुन्छ, फरक यति मात्र हो हामीले बाहिर मनाउँछौं, उहाँहरूले जेलमा मनाउनुहुन्छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
दशैंमा कैदीबन्दीको परिवारका सदस्यलाई दशैंका लागि खाने कुरा ल्याउने तथा टीका लगाइदिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको जेलर पौडेलले बताए ।
डिल्लीबजार कारागारमा दशैंको अवसर पारेर भलिबल, फूटबल, टेबल टेनिस लगायतका खेलकुद आयोजना भयो ।
दशैंको समयमा जेलमा रमाइलो गर्न घर–परिवारको न्यास्रो मेटाउनका लागि यस किसिमका कार्यक्रम गरेको जेलर अरुण पोखरेलले बताए ।
खेलकुद प्रतियोगिताहरूको फाइनल फूलपातिका दिन भयो ।
कारागारका तर्फबाट भने सरकारले निर्णय गरेको ३ सय रुपैयाँबाहेक अरू केही दिने व्यवस्था नभएको पोखरेलले लोकान्तरसँग बताए ।
नख्खु कारागारमा नाम चलेका केही कैदी पनि रहेकाले उनीहरूलाई भेट्न आउने मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ पनि आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको जेलर पोखरेलले जानकारी दिए ।
चर्चित कैदी बन्दीलाई विशेष व्यवस्था हुन्छ र ?
जवाफमा पोखरेलले भने, ‘निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई समेत जेलमा अन्य कैदीबन्दीसरह नै व्यवस्था गरिएको छ, उहाँलाई भनेर त्यस्तो छुट्टै व्यवस्था छैन ।’
यसअघि पनि नाम चलेका कैदीबन्दीका आफन्तहरू धेरै आउने देखिएकाले कारागार व्यवस्थापनले त्यसैअनुसारको व्यवस्थापन भने गरेको उनको भनाइ छ ।